Archive du 20180129
Entana vokarin’ny Tiko AAA Ifandrombahana eny amin’ny mpivarotra
Tsikaritra ny faran’ny herinandro teo fa nifandrombahana teny amin’ny mpivarotra ny vokatry ny orinasa Tiko AAA na ny épicerie tsotra na ireo toeram-pivarotana lehibe (grandes surfaces) eto Antananarivo.
Fitondrana Rajaonarimampianina Fihemorana mirindra, hoy ny SSM
Mbola manohy ny fitakiany hatrany manoloana ireo tsy rariny mianjady amin’ny mpiasa Malagasy ny randrambaon’ny sendikan’ny mpiasa eto Madagasikara na ny SSM, raha ny fanazavan’ny sekretera jeneraliny, Jean Raymond Rakotoniasy, tao amina fahitalavitra tsy miankina 1 ny alin’ny sabotsy teo.
Fiadidian’ny Repoblika Namboly zanakazo 2850
Nanatanteraka fambolen-kazo tany Ilamaka, fokontany Ankadivola ao amin’ny kaominina Ambohijanaka ny avy amin’ny fiadidian’ny Repoblika notarihin’ny filoham-pirenena mivady ny sabotsy 27 janoary lasa teo.
Kolikoly aty Afrika 50 miliara dolara isan-taona no very
Misokatra amin’ny fomba ofisialy amin’ity alatsinainy ity any Addis Abeba- Etiopia ny fivoriana an-tampony faha-30 an’ny vondrona Afrikanina.
Fikirakirana teknolojia Fetsy ratsy i Tatandraza, hoy ny zandary
Tsy dia sarotra ho an’ny mpitandro ny filaminana intsony ny fikarohana ireo olona manao ratsy sy mandika lalàna amin’ny tambajotra “facebook”.
Ady tany eny Ambohitrakely Tsy nilefitra ny miaramila
Ny marainan’ny zoma teo raha tsiahivina no tonga teo amin’ny tany misy ny toeram-piasan’ny mpanao asa tanana 1 vita amin’ny simenitra etsy Ambohitrakely ny andiana miaramila nitondra taratasy milaza fa tany miaramila no misy ity toerana fanaovana asa tanana ity ka tokony hiala teo ny tenany.
Orinasa AIRTEL Nanampy ireo traboina nandalovan’ny AVA
Ireo mponina tany amin’ny faritra atsinanan’ny Nosy tamin’ny ankapobeny no tena nitondra faisana nandritra ny fandalovan’ny rivodoza AVA teto amintsika farany teo.
Misaona ny Antoko AREMA Nodimandry i Solofoson Georges
Nodimandry teo amin’ny faha-75 taonany ny alakamisy 25 janoary teo ny minisitry ny varotra teo aloha Atoa Solofoson Georges rehefa niady tamin’ny aretina tao anatin’ny 5 taona.
Kaominina Imerintsiatosika Namboly zana-kazo 3.000 fototra
Miroso hatrany amin’ny ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ny fiarovana ny tontolo iainana ankehitriny ny kaominina ambanivohitra Imerintsiatosika.
Rugby à XV Tompondakan’i Madagasikara ny FTM Manjakaray
Norombahin’ny fileovan’ny FTM Manjakaray ny anaram-boninahitra, tompondakan’i Madagasikara 2017 eo amin’ny taranja rugby à XV. Lavony tamin’ny isa mazava 44-20 omaly alahady 28 janoary 2018 tetsy amin’ny kianja Mahamasina tamin’ny lalao famaranana ny fifaninanana Gold Top 8 2017.
Koa raha ny mpiasam-panjakana aza moa no efa miaiky fa toy ny mihantsy azy ireo hanao fihetsiketsehana ny fitondrana ka mampanahy sao tetika hanemorana fifidianana izany, tsy aleo koa ve mivonona amin’izay mety hitranga indray isika mianankavy ?
Fahadiovana sy fidiovana Lasa tsy laharam-pahamehana ho an’ny Malagasy intsony
Lasa tsy laharam-pahamehana ho an’ny Malagasy intsony ankehitriny ny fahadiovana. Manomboka amin’ny fahadiovan’ny vatany izany, izay tena lehibe sy goavana indrindra ka hatramin’ny fanadiovany ny faritra misy azy sy ny ao an-tokantranony.
Groupe Vidy Varotra Hanome ny tsara hatrany ho an’ny Malagasy
Ny sabotsy 27 janoary lasa teo no nisafidianan’ny vondron’orinasa Vidy Varotra izay misy ny Gazety Vidy Varotra, Job, Jejoo, Tia Tanindrazana sy ny onjampeo Top Radio 102.8 FM nifampiarahabana sy nifampirariana soa noho ny taom-baovao 2018.
Lalana potika Tsy mitondra fampandrosoana ara-toekarena
Anisan’ny sehatra iray azo hitarafana ny fandrosoan’ny firenena iray ny fahatsaran’ny lalana misy ao aminy. Raha ny eto Madagasikara manokana ohatra, izay firenena miankin-doha tanteraka amin’ny fambolena dia ilaina ny fahatsaran’ny lalana mba amoahana haingana ny vokatra, indrindra any amin’ireny ambanivohitra ireny.
Halabotry tao amin’ny oniversiten’i Fianarantsoa Maty nodobohana vato ilay rangahy
Rangahy iray maherin’ny 50 taona no maty vokatry ny vono sy daroka nahazo azy tao amin’ny faritry ny oniversiten’Andrainjato Fianarantsoa ny marainan’ny sabotsy 27 janoary lasa teo.